လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ဖတ်ကြားသည့် သမ္မတ၏ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရန် ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ (အသံဖိုင်)နှင့်၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်များက မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု လမ်းညွှန်ခဲ့ဘူးသည့် သမ္မတကြီး၏ မှတ်တမ်းများ... ~ ဒီမိုဝေယံ
လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ဖတ်ကြားသည့် သမ္မတ၏ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရန် ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ (အသံဖိုင်)နှင့်၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်များက မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု လမ်းညွှန်ခဲ့ဘူးသည့် သမ္မတကြီး၏ မှတ်တမ်းများ...
၂၀၁၁ခုနှစ် ၁လပိုင်း ၂၂ရက်နေ့က မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့ အေရှဝေါလ် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် စတီဗင်လော(ခ) ဦးထွန်းမြင့်နိုင်.. (ဝဲ)တို့အား တွေ့ရစဉ်။
၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅)ရက်နေ့ ပထမအကြိမ် လာရောက်ကြည့်ရှုစဉ်က ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်မှ မြစ်ဆုံဆည် ပတ်ဝန်းကျင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအား ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် လှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား သတ်မှတ်ရက်ထက် စောလျင်စွာ ပြီးစီးဖို့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြုလုပ်ရန် မှာကြားခဲ့ဘူးပါတယ်...။
လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ဖတ်ကြားသည့် သမ္မတ၏ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရန် ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ (အသံဖိုင်) by Demo Waiyen
အသံဖိုင် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်.. http://www.mediafire.com/?bmq76ka26fud4op
အသံဖိုင် ပေးပို့ပေးတဲ့ Bigest Thu အားကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
အဆိုပါ ၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာတော့ CPI ကုမ္ပဏီမှ တည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ ညစာစားပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအတွက် ကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်...။
Dinner Myanmar Prime Minister, CPI International, Inc. General Manager of Yunnan, Myanmar, chairman of the Asian world,
Water fourteen projects, deputy general manager is toast blessing
သမ္မတကြီး၏ မြစ်ဆုံဆည်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကြေငြာချက်အား အပြုသဘော ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါသည်...။ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား ယခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟု ကြေငြာထားပါသည်...။ ယခုအစိုးရဆိုသူများ လက်ထက်မှာပင် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား အပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းပေးရန်နှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများအား သွားရောက်လေ့လာ၊ ကြည့်ရှု မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်ပြီး.. နောင်တက်လာမည့် အစိုးရများမှလည်း မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါက... ဆက်လက် ကန့်ကွက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာပြည်သူများ ကိုယ်စား အသိပေးအပ်ပါသည်...။
Myanmar Prime Minister Thein Sein to the dense pine plant inspections
၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅)ရက်နေ့က မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းသို့ ပထမအကြိမ် ရောက်ရှိလာတဲ့
ထိုစဉ်က ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်နဲ့ မြစ်ဆုံတရားခံ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်း..
Myanmar Prime Minister Thein Sein (L 7) CPIYN Guang-Hua Li, general manager (right 7)
General Soe Win, commander of northern Burma (right 6) First electricity minister Zaw Min Myanmar (left 5) Yang Yiping, deputy general manager water fourteen projects (right 3) group photo
February 25, 2010, Myanmar Prime Minister Thein Sein will be in the Yunnan Power Investment Corporation, general manager of Guang-Hua Li and other international leaders, utilities Shisiju Deputy General Manager Yang Yiping, Dali Branch Manager have been accompanied by base, inspected Irrawaddy river upstream Myitsone site.
Thein Sein Prime Minister and his party by helicopter to view the entire site, then inspected the resettlement points, Thein Sein of the project expressed satisfaction with the progress.
Attended the evening banquet northern Burma military headquarters set up, seat banquet room Thein Sein and the leading international companies in Yunnan Power Investment, utilities Shisiju company leaders talked about issues related to power plant construction, through the Chinese New Year occasion, another blessing, and the atmosphere is very harmonious.